Faransiiska oo safiirradiisii kala baxay US iyo Australia | Berberanews.com
Home WARARKA Faransiiska oo safiirradiisii kala baxay US iyo Australia
France-(Berberanews)-Faransiiska ayaa Jimcihii maanta ku dhawaaqay inay dib ugu yeedhayaan safiirradoodii Mareykanka iyo Australia iyagoo ka soo horjeeda dhawaaqa Madaxweyne Biden ee heshiiska ah in Australia la siiyo gujisyo quwadda nukliyeerka ah iyadoo aan lagala tashan saraakiisha Faransiiska.
War qoraal ah oo uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayuu ku sheegay in go’aanka uu gaadhay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Jean-Yves Le Drian, Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa yidhi “Codsiga Madaxweynaha Jamhuuriyadda, waxaan go’aansaday inaan si deg deg ah ugu yeesho labada safiir ee Mareykanka iyo Australia u fadhiya Paris si aan wadatashiyo u sameyno.”
“Go’aankaan gaarka ah waxaa lagu sababeynayaa culeyska gaarka ah ee ogeysiisyada ay sameeyeen Australia iyo Mareykanka 15 -kii Sebtember.” Go’aanka Mr. Macron wuxuu sii fogeeyay khilaafka u dhexeeya labada isbahaysi ee soo jireenka ah ee ku saabsan heshiiska badda hoosteeda, kaas oo saraakiisha Mareykanka iyo Australia ay ka qarinayeen Faransiiska ilaa wax yar ka hor inta aan lagu dhawaaqin Arbacadii.
Qoraalka ayaa lagu shaaciyay in danjirayaasha ay si ku -meel -gaadh ugu laaban doonaan Paris – oo ah tallaabo diblomaasiyadeed oo daran.
Mr. Le Drian wuxuu caddeeyay in dalkiisu u arko ficillada labada ummadood inay yihiin xadgudub weyn oo xagga kalsoonida ah. Wuxuu yidhi iskaashiga Mareykanka iyo Australia, oo ka dhalan doona ka tagistii heshiiskii hore ee badda hoosteeda ee u dhexeeyay Australia iyo Faransiiska, wuxuu ka dhigan yahay “dhaqan aan la aqbali karin oo u dhexeeya xulafada iyo shuraakada, cawaaqibkoodu wuxuu saameyn doonaa fikirka aan ka qabno xulafadeenna, iskaashigayaga iyo muhiimadda Indo-Pacific ee Yurub. ”
Previous articleDjibouti oo dalkeeda ka saartay Fahad Yaasiin iyo diyaaraddii siday
Next articleEthiopia: Biden oo saxeexay amar fulineed oo oggolaanaya cunaqabateyn